Xukuumadda Oo Sheegtay Inaan Odayaal Dambe Wakiil Uga Noqonayn Shacabka Ee Ay Toos U Ogaanayso Baahiyahooda | Berberatoday.com
Xukuumadda Oo Sheegtay Inaan Odayaal Dambe Wakiil Uga Noqonayn Shacabka Ee Ay Toos U Ogaanayso Baahiyahooda
Hargeysa(Berberatoday.com)-Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay inaan hadda ka dib loo dhaxayneyn iyada iyo Shacabka, si si dhab ah loogu ogaado Baahiyaha ay qabaan Shacabku oo wax looga qabto.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo Wacyi-gelinta Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Faarax (Guri-barwaaqo), ahna Afhayeenka Xukuumadda ayaa sheegay in hadda ka dib aanay jiri doonin cid u dhaxanaysa Shacabka iyo Xukuumadda ee ay Dawladdu toos ula xidhiidhayso.
Wasiirku wuxuu sheegay inaanu jirin doonin Oday dambe oo Shacabka uga wakiil ah Dawladda “Oday Dambe oo Wakiil idanka noqonayaa ma jiri doono.” Ayuu yidhi Wasiirka oo khudbad ka jeediyey Munaasibad lagu daah-furay9 boqol higtar oo ka mid ah Dhul-beereedka Degmada Xaaxi oo Wasaaradda Beeruhu qodayso.
Wasiirka Warfaafintu wuxuu sheegay in Dawladdu toos ula xidhiidhayso Shacabkeeda “Halkaas ayay Dawladdu idiinku imanaysaa, waad soo qoranaysaa waxaad u baahan tihiin, dabadeedna sidaa Maanta la idiinku qabanayo tii ugu waynayd ayaa la idiinku qabanayaa.”ayuu yidhi, isagoo la hadlaya Shacabka ku dhaqan degmada Xaaxi.
Hadalka Wasiirka ayaa jawaab u ahaa Hadallo ay Waxgaradka Degmada Xaaxi ku sheegeen in aanay Dawladda Wakiil uga ahayn Nin Siyaasi ah iyo Nin Af-miishaar ah oo mar kasta oo danihiisa gaarka ah eeganaya, isagoo ku shaqaysanaya ayay yidhaahdeen Magaca deegaan aanu xaalkiisa waxba kala soconin.